बुटवल : हाम्रो शरीरको महत्वपुर्ण अंग भनेको हाम्रो अनुहार पनि एक हो ! हाम्रो अनुहारमा दाग डन्डीफोर हरु आयो भने हामीलाई चिन्ता हुन्छ ! र हाम्रो अनुहार नै नराम्रो बनाइदिन्छ ! उमेर र किसोरावास्था मा पुगेपछि यो समस्य धेरै ले भोग्नु पर्दछ ! यो यौटा प्रकार्तिक प्रक्रिया हो ! आउछ जान्छ तर सबैको मा भने त्यस्तो नहुन सक्छ कसैकसैको मा भने दाग डन्डी फोर हरु धेरै नै आएको पाइन्छ ! र डाक्टर को औषधि ले पनि निको नभएर हामी चिन्तित भएका हुन्छौ !
आउनुहोस कुरा गरौ घर मै बसेर अनुहार को दाग डन्डीफोर लाइ हटाउने यी तरिकाहरु ! दुई चम्चा जौको धूलोमा कागतीको रस मिसाई पेस्ट बनाएर दाग भएको ठाउँमा लगाउने गर्नुपर्छ । कागतीको रसमा ब्लिचिङ गुण हुन्छ । यसले कालो धब्बा हटाउन मद्दत गर्छ । यसका लागि कागती काटेर अनुहारमा दल्ने र केही समय त्यसै छोडी मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्छ ।दूधमा ल्याक्टिक एसिड पाइन्छ । काँचो दूधमा कपास डुबाई अनुहारमा बिस्तारै दल्ने र केही समय त्यसै छोडेर सुकेपछि मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्छ । घ्यूकुमारीमा छालासम्बन्धी अनेक समस्या समाधान गर्ने गुण हुन्छ ।
आलुको पेस्ट बनाई यसमा मह मिसाएर अनुहारमा दली केही समय त्यसै छोडेर धुने गर्नाले अनुहारको दाग हराउँछ । बेसारमा काँचो दूध र कागतीको रस मिसाई दाग भएको ठाउँमा लगाएर केही मिनेट त्यसै छोडी मनतातो पानीले पखाल्नुपर्छ । पाकेको मेवाको भित्री भागलाई अनुहारमा दलेर २० मिनेटपछि पखाल्ने गर्नाले अनुहारको दाग हराउँदै जानुका साथै अनुहार चम्किलो बन्दै जान्छ । प्याजको रसले कटनको टुक्रा भिजाई दाग भएको ठाउँमा दल्ने र केही समयपछि धुने गर्नुपर्छ ।
साथै, एक चम्चा प्याजको रसमा दुई चम्चा मह मिसाई अनुहारमा दलेर २० मिनेटपछि पखाल्ने गर्नाले दाग हराउँदै जान्छ।भुइँकटहरको जुसमा कपास डुबाई अनुहारमा दल्ने र २० मिनेटपछि पखाल्ने गर्नाले दाग हराउँदै जान्छ । ओखरलाई कुटेर त्यसमा दही र केही थोपा बदामको तेल हाल्नुहोस् । यसलाई अनुहारमा लगाउनुहोस् । यसले छालामा चमक ल्याउँछ ।
तपाईंको छाला एकदमै तैलीय छ भने अन्डा र गहुँको पिठोको प्याक लगाउनुहोस् । यसले छालाको तेललाई नियन्त्रण गर्छ । हरेक रात सुत्नुअघि अनुहारमा जैतुनको तेल लगाउनुस् । यसले अनुहारलाई नरम बनाउँछ । यसले छालामा जमेको कालो दाग कम गर्न पनि मद्दत पु¥याउँछ । केरा, मौसम, अन्डाको प्याकले अनुहारमा भएका दागहरू हटाउन मद्दत गर्छ ।गोलभेँडा, कागती र अन्डाको प्याक लगाउनाले डन्डीफोर, कालो धब्बा हट्नुका साथै छालामा चमक पनि आउँछ ।
गोलभेँडा, कागती र महको प्याक लगाउनाले अनुहार चम्किलो हुन्छ । घामले डढेर कालो भएको छालामा काँचो दूधले मसाज गर्दा फाइदा हुन्छ ।खैरो चिनी, कागती र नरिवलको तेल मिसाई मसाज गर्नाले सनबर्नको असर कम गर्न सकिन्छ । काँक्रोको पेस्ट, मुल्तानी माटो र रोज वाटरको प्याक बनाएर लगाउँदा अनुहारमा चमक आउँछ । एक चम्चा नुनमा आधा चम्चा खाने सोडा र एक चम्चा मह राखेर घोल्ने र त्यसले अनुहारमा मसाज गर्ने यसबाट पनि अनुहारको छालामा चमक आउँछ ।
यो पनि पढ्नुहोस ! यो पनि पढ्नुहोस ! जति पढ्दा पनि दिमागमै घुस्दैन ? यसो गर्नुहोस्, यस्ता छन् टिप्स ।
काठमाण्डौ । धेरैले भन्ने गर्छन् पढ्न त कसलाई मन हुँदैन र तर जति पढे पनि याद नै हुँदैन। यदि पढेको याद हुँदैन भने वास्तु शास्त्र अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। वास्तु शास्त्रले विभिन्न दिशा वाट प्राप्त हुने ऊर्जाका आधारमा कुनै पनि वस्तुको प्रयोग कसरी गर्दा फाइदा पुग्छ भन्ने जानकारी दिन्छ। वास्तु शास्त्र अनुसार अध्ययनलाई व्यवस्थित र अध्ययनमा लगनशील र तिष्ण बन्नका लागि अध्ययन कक्षलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । त्यस कक्षामा प्रयोग हुने रङ्ग, पढ्ने टेबल आदीले पनि पढाइमा प्रभाव पार्छ । तसर्थ वास्तु शास्त्रका अनुसार अध्ययन कक्षको व्यवस्थापन यसरी गर्न सकिन्छ ।
अध्ययन कक्षाका लागि उपर्युक्त दिशा ईशान (पूर्व—उत्तर) दिशा उत्तम हुन्छ। यी दिशाहरु एकाग्रता बढाउने दिशा मानिन्छ।
अध्ययन गर्ने टेबल आकारमा वर्गाकार या आयातकार हुनु पर्छ। टेबुलको आकार निकै ठूलो अथवा धेरै सानो पनि हुनु हँुदैन। टेबल पुस्तकहरुले भरिएको हुनु हुँदैन।
अध्ययन कक्षका भित्ताको रंग हल्का निलो, घिउ रंग, सेतो या हल्का हरियो राख्न सकिन्छ।
अध्ययन कक्षमा नै सुत्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। टेबल—लेम्प अध्ययन टेबलको दक्षिण—९पूर्व दिशामा हुनु उपर्युक्त हुन्छ। टेबलमा प्रकाश देब्रेपट्टीबाट आउने गरी व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ।
किताब राखिने अलमारी, दराज आदि अध्ययन कक्षको पूर्व, उत्तर अथवा उत्तर—पूर्व दिशामा राखिनु पर्छ। अध्ययन कक्षको उत्तर—पश्चिम दिशामा नराख्नु नै उचित हुन्छ।